ဒုတိယကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်တွင် စိတ်ထဲမှာခံစားနေ ရသော အရာ လေးတွေကို ရေးသား ပြောပြလာခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် – XB Media Myanmar
သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရပ်တည်လာခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအပေါ် ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်တဲ့ သူမရဲ့ပုံစံကြောင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ မှာ လည်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းလောက်က ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းသာစရာ သတင်းတစ်ခု ဝေမျှ ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒုတိယကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတာဖြစ်ပြီး ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေများက နှိုင်းယှဉ်အတွက် ဝမ်းသာကြည် နူးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ဒုတိယကိုယ်ဝန်လွယ် ထားနေရချိန်တွင် စိတ်ထဲတွင် ခံစားနေရတဲ့အရာလေးတွေကို ရေးသားပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း ” ပထမကိုယ်ဝန် တုန်းက မျက်နှာကရင့်တယ်…. စိတ်လည်းအရမ်းကြီးတယ်.. ဒေါသခဏခဏ ထွက် တယ်….တုတ်ဆွဲ ဓားဆွဲ လုပ် တယ် ရိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်း အရမ်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေ ရိုက်ရတယ်…. အသီးတွေ အရမ်းစားတယ်…အော့အန်မူးဝေ တာ ပျို့တာ
ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး…. ခု ဒုတိယကိုယ်ဝန် မျက်နှာက နုဖတ်နေတယ် မနက်မိုးလင်းထဲကပျို့အန်မူးဝေရင်တလှပ်လှပ်ကနေ့လည်လောက် မှ ပျောက်တယ်…. ချောကလက် ရေခဲမုန့် နဲ့ မြင်မြင်သမျှစားချင်တယ်… စိတ်အရမ်းနုတယ်….ဘာသတင်းဖတ်ဖတ် မျက်ရည်ကျတယ်… .ရုပ် ရှင်ကားကြည့်လည်း ငိုတယ်….
ပါးစပ်က ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေ ဆဲတာတွေ စိတ်ကပြောချင်ရင်တောင် ပြောမထွက်ဘူး…. ဘာလေး လိုချင်လည်းလို့မေးရင် မိန်းကလေး အိပ်မက်ထဲက မမရေ လို့ ခေါ်နေတဲ့ မိန်းခလေးး ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ထဲက တစ်ခါအိပ်မက်မက်တယ် လို့ ရေးဖူးတယ်…မမရေ မမရေ နဲ့ခေါ်ပြီး လိုက်လာတာ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့နားကောက် လေးနဲ့ ချောချောလေး
၁၂လပိုင်း ၂၃ရက်နေ့က ကျိုက္ခမီစက်စဲသွားပြီး ပြန်လာပြီးကတည်း က ကလေးအိပ်မက် တွေ မက်တယ်… ဘယ်ကပဲ လာလာ အကောင်း ဆုံးကြိုးစားပြီး ကျွေးမွေး စောက်ရှောက် ပါ့မယ်… လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါ့မယ် သားနဲ့သမီးရယ် ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။